Nidaamka Ilaalinta waxa shaqsiga uu gaar ah - The Migrant Project
Siyaasadan waxay tibaxaysaa sida mashruuca muhajiriintu u isticmaalo una dhawro xogkasta oo aad siinayso mashruuca markaad isticaalayso mareegtan.
Mashruuca muhaajiriintu wuxuu balanqaadayaa inuu hubiyo in xogtaada shaqsi la asturo. Hadii aan kuwaydiino inaad nasiiso xog taas oo lagu aqoonsanayo markaad isticmaalayso mareegtan, kadib waxaa lagaa hubinyaa in xogtaa loo isticmaalo sida ugu haboon ee uu tibaaxayso odhaahda dhawrista xogta shaqsiga.
Mashruuca muhajiriintu wuu badali karaa siyaasada wakhti kabacdi isagoo ku cusboonaysiinaya bogan. Waa inaad hubisaa bogan markasta si aad u xaqiijiso inaad ku qanacsantahay isbadalka ku yimid.
Maxaan soo ururinaa?
Xogahan hoos ku xusan ayaan ururin karnaa:
Xogta xidhiidhka, sida cinwaanka Iimaylkaga hadii aad suaal noo soo dirto
Macluumaad kusahabsan sida loo isticmaalo mareegtan
Maxaan ku falaynaa xogta aan ururinay?
Waxaan xogtan u isticmaalaa in aan fahano baahidaada gaarka ah kadibna aan kor uqaadno tayada mareegtan. Marnaba shaqsiyan ma ogaan karo xogta aad isticmaalayso.
Waxaan balanqadaynaa in aan hubino in xogtaadu ammaan kuu tahay. Si aan uga hortagno in si sharcidaro ah lagu isticmaalo ama loo faafiyo xogtaada, waxaan samaynay nidaam lagu ilaalinayo xogaha aan ku ururino qaabka loo yaqaano onlineka.
Sideen u isticmaalnaa Kuukiska?
Kuukis waa fayl yar oo kuwaydiinaya ogalaashahaaga si aad u dhigto qaybta kaydka (hard drive) ee kuumbiyuutarkaaga. Marka aad ogalaato kadib faylku wuu ku darsamayaa wuxuuna kaa caawinayaa in aad tifatirto taraafikada mareegta ama wuxuu kuu sheegayaa marka aad booqato mareeg gaar ah. Kuukisku wuxuu sidoo kale u ogalaadaa mareegtu inay kuugu jawaabto si shakhsi ah. Isticmaalka mareegtu waxay kuu sahlaysaa in ay ogaato baahidaada, sida waxa aad jeceshahay ama aad nacdey iyadoo xasuusanaysa xogta aad hore u galisey mareegta.
Waxaan isticmaalnaa trafik log kuukis si loo ogaado boga la isticmaalayo. Tani waxay ka caawinaysaa in la darso xogta boga kadibna la horumariyo mareegta si ay ula jaanqaado baahidaada. Waxaan kaliya u isticmaalaynaa xogtan ujeedo taxliilin kadibna xogta waa laga saarayaa boga.
Guud ahaan, kuukisku wuxuu naga caawiyaa in aad hesho mareeg tayo leh, iyadoo noo sheegaysa in aan lasocono mareegta faaidada leh iyo ta aan lahayn. Kuukisku marnaba nama siin karo xogtaada ama ta kuumbiyuutarkaaga, marka laga reebo xogta aad nala wadaagtey.
Waad dooran kartaa in aad ogolaato ama diido kuukiska. Webbrowsersku badankoodu waxay aqbalaan kuukiska, laakiin waad badali kartaa browser settingkaaga si aad u xidhid hadaadan rabin.Laakiin tani waxay xadidaysaa in aad boga ka faaidaysato.
Xidhiidhka mareegaha kale
Mareegtayadu waxay kula xidhiidhinaysaa bogag kale oo xiiso badan si aad si dhibyar ugu booqato. Laakiin, marka aad isticmaasho linkiyada oo aad ka baxdo bogayaga, wax koontorol ah kuma lihin boga kale. Sidaa daraadeed, masuul kama nihin ilaalinta iyo xadaynta xogaha aad siiso marka aad booqanayso sidoo kale odhaahda ilaalinta xogta shaqsigu maxukunto. Waa inaad ka taxadartaa oo aad eegtaa odhaahda ilaalinta xogta shaqsiga ee boga aad booqanayso.
Xakamaynata xogtaada shaqsiyeed
Ma gudbinayno xogtaada shaqsiga in sharcigu u baahdo mooyee. Lama wadaagayno xogtaada xafiis kale, ujeedadu ha ahaato iibin xog, cilmi baadhis suuq ama sababo ganacsi awgood, umana gudbinayno xogtaada mareeg kale.
Waxaad naga codsankartaa xogta shaqsiga oo faahfaahsan taas oo aan ku kaydino xeerka ilaalinta xogta ee looyaqaan (Data protection Act 1998). Lacag yar waa in aad bixisaa. Hadaad ubaahato koobiga xogta laguu kaydiyay fadlan nagala soo xidhiidh cinwaankan admin@themigrantproject.org. Waxaad naga codsankartaa in aanan isticmaalin waxkamida macluumaadka aan ururino.
Kuukiska iyo sida ay kuugu faaidayn karaan
Mareegtayadu waxay isticmaashaa kuukis, mareegaha badankooduna way isticmaalaan si ay kuusiiyaan khibrada ugu fiican.
Kuukisku waa faylal yaryar oo ladhigo kuumbiyuutarkaaga ama moobaaylkaaga markaad booqato mareeg.
Kuukiskayagi waxay naga caawiyaan;
In mareegtayadu ushaqayso sida aad rabto
In aad xasuusnaato setting xiliga aad booqanayso boga
In uu kor u qaado xawliga ama amniga mareegta
Wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la wadaagtid bogaaga baraha bulshada sida facebook.
In aan si joogto ah kor ugu qaadno tayada mareegta
In aan ka dhigno suuqgeyntayada mid waxtarleh ( Anagoo ku bixinayna addeegayaga qiimaha aan u goynay)
Uma isticmaalno kuukiska:
In aad ku ururino xogtaaada shaqsiga ee lagarankaro adiga oo aan ogolaan.
In aan ku ururino xogaha xaasaasiga ah adiga oo aan ogolaan
In aan u gudbino xogta shabakadaha wax xayaysiiya
In aad xogtaada u gudbino xubin sadexaad
In aad bixiso gunada iibka
Si faahfaahsan hoos kaga bogo dhamaan kuukiska aan isticmaalno
Fasax noo sii si aan u isticmaalno Kuukiska
Hadii aad softweerka aad isticmaalayso si aad u aragto mareegtan uu ku hagaagsanyahay in uu aqbalo kuukiska sidaas ayan ku qadanaynaa iyadoomicnaheedu yahay inaad noo ogolaatey. Hadii aad rabto in aad kasaarto ama aadan rabin inaad isticmaasho kuukiska mareegtayada, hoos kabaro habka loo looga saaro. Laakiin hadii aad sidaa samayso waxay ka dhigantahay in aadan mareegtayada u isticmaali karin sidii aad rajaynaysay.
Kuukiskayaga khaaska ah
Waxaan u isticmaalnaa kuukiska si mareegtayadu:
U xasuusato wixii aad raadinaysay
Majiro habkale oo aad u xadidi kartid kookiska mareegtayada in aadan booqan mareegtayada mooyaane.
Kuukiska Mareegaha Bulshada
Waxaad riixi kartaa botomada ‘’Like’’ ama aad lawadaagi kartaa macluumaadkayaga baraha bulshada sida faysbuug iyo tiwiiter.
Kudar- polisiyada ilaalinta xogta gaarka ah waxay nasiinaysaa botono badan oo aad kula wadaagi karto si waadax ah
Ilaalinta xogta gaarka ah ee baraha bulshadu way kala duwan yihin oo waxaa ay ku xidhan yihin siyaasada ilaalinta xogta gaarka eed adigu barahan kudoorato.
Waxbixinta Kuukiska Qofka aan Haybtiisa Lagaranayn
Waxaan kuukiska u isticmaalnaa si aan isugu dubaridno macluumaadka dadka soo booqda bogayaga sida imisa qof ayaa soo booqatay boga, nooca teknoolajiyada ay isticmaalayaan (Sida Mac ama windows taasi oo naga caawisa in aan ogaano marka aanu mareegtayadu kushaqaynayn tiknoolajiyada aan soo sheegnay), xadiga wakhtiga aad isticmaashey mareegtayada, iyo bog noocee ah ayaad raadinaysaa inaad booqato iwm. Tani waxay noo fududaysaa inaan kor u qaadno tayada mareegtan.Barnaamijka loo yaqaano ‘’analytics’’ waxay noo sheegaan sida dadku kusoo boodaan mareegta tusaale ahaan in ay naga raadiyeen intarnetka iyo inay marhore soo booqdeen bogan taas oo naga caawisa in aan lacag badan ku bixino horumarinta adeega mareegta.
Sida laiskaga Damiyo Kuukiska
Waad iska daminkartaa kuukiska adigoo kaashanaya browserkaaga si aanu u aqbalin kuukiska ( Halkan kabaro). Laakiin hadii aad damiso kuukiska waxay xadidaysaa shaqaynta mareegtayada iyo mareegaha kale ee caalamiga ah maxaa yeelay kuukisku wuxuu qayb weyn kayahay tayaynta mareegaha casriga ah.
Waxaa laga yaaba inaad walaac kaqabto kuukiska waxbasaasa ee looyaqaano ‘’spyware’’. Halkii aad kadaminlahayd kuukiska waxaad isticmaalikartaa sooftweyr kahortaga ee loo yaqaano anti-spyware kaas oo kaa saaraya kuukiska khatarta ah. Kabaro halkan sida loo maareeyo kuukiska adigoo isticmaalaya ‘’antispyware softweer’’